पुष १३, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
वीरगंज । आजको संसार संचारको हो । त्यसैले भनाइ नै छ, संचार छ त संसार छ । त्यसमा पनि सामाजिक संजालको विकासले आज हरेक मान्छे संचारकर्मी भएका छन् । सिटिजन पत्रकारिताको यो युगमा सामाजिक संजालका कारण आज प्रत्येक मान्छे सूचना र संचारको पहुँचमा पुगेको छ । यसले परम्परागत मूलधारको संचारको डाइनामिक्स नै परिवर्तन गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सामाजिक संजाल आफ्नो व्यक्तिगत पीर व्यथा र खुशी साट्ने थलो मात्र होइन, बौद्धिक बहस गर्ने चौतारी समेत भएको छ ।
पछिल्लो समय त चुनावी क्याम्पेन र एजेण्डा सेटिङको सशक्त माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक संजाल देखा परेको छ । के विकसित देश, के अविकसित देश, सामाजिक संजालमय भएका छन् । के शहर, के गाउँ जहाँका मानिसहरु पनि सामाजिक संजालमा झुम्मिएकै छन् । हरेक प्रविधि वरदान मात्र हुँदैन, अभिषाप पनि हुन्छ । सामाजिक संजालका लागि पनि यो लागू भएको छ । भनाइ नै छ, चिनी पनि बढी खायो भने तितो हुन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालका दुष्प्रभावहरु पनि उजागर हुन थालेका छन् । सामाजिक संजाल अत्यधिक प्रयोग गर्ने मानिसहरु मानसिक रोगको शिकार बन्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरुको राय छ । उनीहरुमा प्रायः डिप्रेसन र निद्रा नलाग्ने समस्या देखिने गरेको छ । हामी सामाजिक संजालको प्रयोग के का लागि गर्छाै ? फुर्सदको समय बिताउनका लागि कि, केही ज्ञान हासिल गर्नका लािग ?
सामाजिक संजालको प्रयोग सबैले एकै ढंगले गर्छन् भन्ने छैन । सामाजिक संजालको विभिन्न तरिका तथा उद्देश्यले प्रयोग भइरहेको छ । मुख्यतः नीजि र सार्वजनिक गरी दुई उद्देश्यले प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आफ्ना परिवार तथा दैनिक जीवनका फोटोहरु पोष्ट गर्ने, परिचितहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, परिचय तथा मित्रता बढाउने माध्यमका रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने धेरै छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक जीवन, सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा सामाजिक बहस तथा सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक संजालको प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
सामाजिक संजालमा सामाजिक नै भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, असामाजिक बन्न हुँदैन । सहिष्णु बन्नुपर्छ, असहिष्णु बन्न हुँदैन । असहमत र फरक विचारको आलोचना गर्न हुन्छ, बहस गर्न हुन्छ । तर मर्यादा र शिष्टाचारको लक्ष्मण रेखा नाघ्न हुँदैन । एक्लै कोठामा या कुनै ठाउँमा भएको बेला सामाजिक संजालमा विचार लेखिन्छ तर त्यो विचार सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । अरुका सकारात्मक काम तथा विचारको प्रशंसा गर्न सामाजिक संजालको उपयोग गरिनु पर्छ । सकारात्मक टिप्पणीले व्यक्तिलाई सकारात्मक काम गर्न उत्प्रेरणा मिल्छ । अर्थात सामाजिक संजालमा विचार लेख्दा तपाईं एक्लै हुनु भए पनि लाखौं अदृष्य मानिसले तपाईंलाई हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सामाजिक संजालको उपयोग कि दुरुपयोग गर्ने ? सञ्जालको सकारात्मक उपयोग गरेर समाज र देशलाई योगदान गर्ने हो की ?
सामाजिक संजालको प्रयोगले अनेक फाईदा भए पनि हामी फाईदा लिन नसकेकोले यसको नकारात्मक प्रभाव हामी माथि परिरहेको देखिन्छ । टाढा भएकोलाई जोड्ने तर नजिक रहेकालाई टाडा बनाउने सामाजिक संजालको प्रयोग सहि होइन । यसले हाम्रो जिवनमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ । आफूले गरेको पोष्टमा कसले लाईक ग¥यो ? कसले कमेन्ट ग¥यो ? अवथा फलानोले मेरोमा लाईक समेत गरेन भनेर टाउको दुखाउनुभन्दा आफ्नो फाईदाको लागि प्रयोग गरौं । आफ्नो व्यापार व्यवसायको वृद्धि विकासको लागि प्रयोग गरांै होइन भने सामाजिक संजाल जंजाल बन्न सक्छ । सामाजिक संजालको प्रयोग राम्ररी गर्न जानिएन भने आफ्ना हितका लागि खोलेको सामाजिक संजालको कुलत बसेर हामी सामाजिक जंजालको पनि बन्न सक्छौं । त्यसैले सामाजिक संजालको प्रयोग के का लागि प्रयोग गरिरहेका छौं ? त्यो एक पटक सोच्ने होइन ?
मगलवार, पुष १३, २०७८, १२:१२:००
मध्य तराईमा चिसो स्याँठ‚ जनजीवन प्रभावित
जाली नोट सहित २ भारतिय पक्राउ
पुष ४, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
सुनको भाउ एकैदिन एक हजार रुपैयाँले बढ्यो
पुष ३, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता